I-OPS Auto Iinkcukacha ezithengisayo, Ukucoceka kwezindlu Eco-Friendly | Ibhulogi
Iipesenti ezili-10 zokuCoca iiTafile zokucoca ezinamaLitha angama-40 iLitha yokuhlamba amanzi
Agasti 20, 2020 Agasti 20, 2020 by admin@opskar.com
Kwimarike, kukho abanye abathengisi ababonelela ngamacwecwe eefestile. Kutheni ukhetha thina?
Ubume bendalo kwaye akukho monakalo efestileni
Ukuchithwa ngokufanelekileyo kwaye kungashiyi mkhondo.
Susa ngokukhawuleza ioyile, ukungcola, uthuli.
Thambisa isicoci kwaye unciphise ingxolo.
Coca ifestile kunye nokuqhuba ngokukhuselekileyo.
Ithebhulethi enkulu ekhethekileyo (i-5 gram), ilingane ne-wiper fluid eyaneleyo!
100% ulwaneliseko ngenkonzo yabathengi ebonelelweyo.
Zisebenza njani iitafile zokucoca ezifanelekileyo?
-Kusebenza kakhulu ekususeni ukutshiza kwezinambuzane, ilindle leentaka, incindi yomthi kunye nokungcola kwendlela kwifestile yakho yomoya. Ungayisebenzisa nokucoca izipili kunye nayo nayiphi na enye indawo efuna ukubengezela kwaye ikhanye! Kukhuselekile kuzo zonke iintsimbi, iifestile kunye neglasi, irabha, iplastiki kunye nepeyinti.
Amagqabi ashiye umkhondo okanye ukubonakalisa ukubonakala okukhulu kunye nokhuseleko. Ngapha koko, ayiqulathanga
iiarhente ezibengezelayo kwaye ayonakalisi impahla kunye nomzimba. Ezendalo, ezinokuboliswa ziintsholongwane, ezingenayo i-phosphate,
kunye nefomula engenaqholo. Yinyibilike kakuhle ngaphandle kwentsalela!
-Ixubene nearhente yokubambisa, ukuphucula ukusebenza kokucoca ebusika. Qaphela: Nceda uqaphele ukuba olu luyilo lwasehlotyeni. Ayizukuthintela amanzi ukuba angabi ngumkhenkce kwitanki lakho.
- Le thebhulethi yokuwasha ifestile iza kukugcinela imali eninzi xa kuthelekiswa nokuthenga ulwelo olungumgubo “odidi”.
Iipesenti ezili-10 zokuCoca iiTafile zokuCoca, uyakufumana iilitha ezingama-40 zeWiper Fluid.
-Tshintsha indawo yokucoceka kwesintu! Ithebhulethi ilunge ngakumbi ukuhanjiswa kunye nokugcinwa ngokuthelekiswa neetoti eziqhelekileyo.
Uzisebenzisa njani iitafile zokucoca ezifanelekileyo?
1: Zinyibilike iipilisi kwibhotile yamanzi kwaye, wakube unyibilikile, uyigalele etankini kwaye ugcwalise ngamanzi.
2: Yahlula okanye usile amacwecwe, uwagalele kwindawo yokugcina ifestile yomoya kwaye ugcwalise ngamanzi.
Ngemizuzu embalwa, bayazinyibilikisa, iphelele apho.
Umgangatho uyafana nayiphi na i-€ 4 okanye i- € 5 ye-wiper ngebhotile eyi-5 yevenkile kwivenkile enkulu okanye efanayo,
kwaye ngaphandle kokuthetha, kubiza kakhulu!
Ulwazi oluninzi, nceda ucofe Apha!
iindidi Akohlulwanga Ushiye uluvo
Kutheni usebenzisa imoto engachukumisi?
Agasti 6, 2020 Agasti 6, 2020 by admin@opskar.com
Ukuhlamba imoto ngaphandle kokuchukumisa ngaphandle kokuhlamba izandla
Ukuhlamba imoto ngaphandle kokuchukumisa kukwabizwa ngokuba kukuhlamba imoto, kwaye isebenzisa isodium, i-wax ukuhlamba imoto.
Olu hlobo lokuhlanjwa kweemoto lufumene ukuthandwa njengeyona nto intle kakhulu ye-eco-friendly enye indlela yesiNtu
imoto echitha amanzi ihlamba. Ukuhlamba imoto ngaphandle konxibelelwano kunokuba luncedo ngakumbi kwingingqi ethwaxwe yimbalela, apho ukunqongophala kwamanzi kuyingxaki.
Zininzi iimveliso zokuhlamba imoto kwintengiso, kwaye imveliso nganye yahlukile kwisithako sayo esisebenzayo.
Uhlobo lokuqala lweemveliso zokuhlamba iimoto ezingachukumisiyo ze-OPS ziqulathe imichiza efana ne-sodium gluconate,
Isosteareth ukwaphula ukungcola nokucoca imoto ngokufanelekileyo. Imveliso iqulethe izithako zendalo
Izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane, ioyile, kunye netyhefu. Enye ifomula yenziwe nge-carnauba wax kwaye ithandwa
nabalandeli bemoto abonwabela imveliso bobabini Ukucoca kunye ne-wax kwaye ingenza imoto ikhanye.
Ngaphandle kweendidi ezininzi zeemveliso zokucoca imoto ezingachukumisi ezikhoyo, nganye isebenza ngokufanelekileyo ngendlela efanayo
ukuhlamba imoto. Xa zitshizelwe emotweni, ezi arhente zibopha ngamasuntswana omdaka ukuze zicinywe
umphezulu wemoto. Emva koko, yixovule ngoxinzelelo oluphezulu lwe-washer ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Njengokulandela, itawuli ethambileyo okanye itawuli ye microfiber ingasetyenziselwa ukukhupha intsalela eseleyo.
Xa kuthelekiswa nokuhlanjwa kweemoto zemveli, ezi mveliso zokuhlamba iimoto zinokonga ixesha labathengi kwaye zigcine amanzi.
Ixesha lokumanzisa kunye nokomisa liyasuswa, ke ixesha elifunekayo lokuhlamba yonke imoto usebenzisa i-OPS yangaphandle
iimveliso zokucoca zinokunqunyulwa kwisiqingatha. Ukongeza, uninzi lweemveliso zokuhlamba iimoto zibonisa ukuba ziqhelekile
Ukuhlamba imoto ekhaya kusetyenziswa ukuya kuthi ga kwiilitha ezingama-200 zamanzi. Ngaphandle koko, indawo yokuhlamba imoto yesiqhelo nayo
yenza "inkunkuma enetyhefu," kuba amanzi amdaka agcwele ukungcola, ukungcola kunye negrisi anokusebenza nemoto
Ngaphandle kwezi zibonelelo "ziluhlaza-luhlobo" oluqinisekileyo, iimveliso ezingachukumisiyo zokuhlamba iinqwelo mafutha zisekhona ezinye zokuthandabuza.
Uninzi lwabasebenza ngokuhlamba iimoto ngokwesiqhelo balumkisa ngengozi yokusebenzisa iikhemikhali ukucoca umphezulu wenqwelo,
ezinokubangela umonakalo omkhulu kwipeyinti. Kwakhona, uluhlu olubanzi lweemveliso ezicocekileyo kwimarike,
ezininzi ziqulathe izithako ezingangqiniswanga okanye ezingaziwayo. Kuyacetyiswa ukuba ngaphambi kokuthenga nayiphi na le mveliso,
abathengi kufuneka baphande ngento esebenzayo kwimveliso nganye ukuqinisekisa ukuba kukhuselekile ukuyisebenzisa kuyo
imoto eneempembelelo ezincinci ekugqibeleni.
Eyona Windowhield Washer Fluid eyi-2020
Julayi 28, 2020 Julayi 28, 2020 by admin@opskar.com
Ngenxa yezizathu zokhuseleko, kubalulekile ukugcina isivalo somoya semoto sicocekile!
Iitafile ze-OPS zomoya ezinamandla zomoya ziyindlela enamandla, yendalo yomoya yokutsala umoya egxila kuyo
iqinisekisa umbono ocacileyo. Ukucoca kunye nokucoca iifestile zangaphambili kwaye zomile ngaphandle kokushiya imijelo okanye intsalela.
Ithebhulethi nganye exutywe namanzi ngaphambi kokuba uyithululele kwitanki yemoto.
Ezi zicwecwe zetafile yomoya zenziwe e-China kwaye ziguqukile nje.
Iwiper yomoya enziwe ngendlela yeetafile zolwazelelo ukubeka ngokuthe ngqo kwitanki
ubonelelwe ngombane wefestile yewashi yesithuthi sakho, udibanisa i-4.0 - iilitha zetephu okanye amanzi asebhotileni.
Gcina isixa esikhulu semali kwiwindows yakho yewindows fluid. Ewe, ukusetyenziswa kweetafile ze-wiper enye
Ixutywe kumanzi ompompo ithatha indawo ukuya kuthi ga kwiilitha ezi-4.0 zemveliso ye-wert yesiqhelo.
Ngenxa yesimo sethebhulethi kunye nokuhanjiswa kwayo kwibhokisi encinci egcinwe kwigumbi lakho leglavu, ephaketheni.
Umzekelo, le thebhulethi yokucoca i-effeedcent ilungele ukuyisebenzisa kwaye kulula kakhulu idosi.
Ulibale malunga nemigqomo ehamba emqukumbelweni wemoto yakho. Iipads zewiper yewindows ziyasebenza,
Indalo, kwaye ngaphezulu kwako konke kuqoqosho kakhulu: ibhokisi enye ineetafile ezilishumi,
elingana neelitha ezingama-40 zewaweli yomoya enewindows, kwaye iindleko kuphela kuthatha iidola ezi-2.15.
-Yenzelwe: Ixabiso eliphantsi nelisebenzayo.
-Uphawu: Kugxilwe kwi-Ultra, kuqoqosho.
- Ukhuseleko: Alushiye intlenga. Akukho bungozi beepende, iiplastiki kunye neerubber.
Uhlobo lwamanzi: Amanzi apompoweyo, amanzi amaminerali, amanzi acociweyo, amanzi angenanto. (Awusebenzisi amanzi omhlaba).
-Ukuchasene: Imodeli efanayo ayisebenzi unyaka wonke.
- Amandla: Ithebhulethi ekhethekileyo ye-5 gram kwintengiso. Ukugxininiswa ngakumbi, Ukucoca okunamandla!
Ithebhulethi enye ye-Vision Tabs yanele ukuvelisa ukuya kuthi ga kwi-4L yamandla ombane washe wamanzi anamandla
Amacwecwe anqabileyo, ke itanki yakho iya kukhuselwa iye kutsho kwi-0 degrees Celsius,
ukuvumela ukuba usebenzise le mveliso unyaka wonke phantse kumazwe.
Ngamaqondo obushushu angaphantsi kwe-zero, unokongeza i-antifreeze yakho eqhelekileyo.
Uqoqosho kakhulu: Ngaphantsi kwexabiso le-barrel, igcinile amaxabiso e-3-4.
Kulula ukuyigcina, akusayi kufuneka uyigcine phantse imigqomo engenanto,
kwaye unokugcina iilitha ezingaphezulu zeewindows zeshishini kwindawo encinci.
Indalo: Iitafile ezinokusetyenziswa ziidafile, ngaphandle kwephosphate.
Ukuncitshiswa kokukhutshelwa kwe CO2 kokubini kwezothutho nakwimveliso yesigubhu kunye nokuphinda kusebenze kwakhona.
Kusetyenziswa kwanjani: Ubeka ithebhulethi kwitanki lokuhlambela lemoto yakho kwaye ugcwalisa ngamanzi abalekayo
(amacwecwe aqukethe unyango olwakhiweyo ngaphakathi). Malunga nemizuzu eli-10, iitafile ziyanyibilika ngokupheleleyo
ngaphandle kokushiya intsalela. Isenokungabi licebo elilungileyo kwiimozulu zobushushu kuba kufuneka ubeke
i-antifreeze eceleni okanye usebenzise i-wiper fluid enezixhobo zesiselo.
Ukujonga umenzi wamacwecwe amdaka eewindows Windowhield, Iinkcukacha zoqhagamshelwano thina!
Eyona ndawo icocekileyo yokucoca imoto ngaphakathi
Julayi 23, 2020 by admin@opskar.com
Ungayikhetha njani imveliso efanelekileyo yokucoca imoto ngaphakathi?
Kuya kufuneka uyazi ezona ndawo zingcolileyo ngaphakathi ngaphakathi kwimoto zezona ndawo uzichukumisayo, okuthetha ukuba ubume bokuqhuba
ivili, ibhanti lesihlalo, iqhosha lokutshintsha kunye neplaneli yomnyango esecaleni lomqhubi. "V" phakathi kwemilenze yakho,
apho umoya wakho we-Egg McMuffin kunye nomoya wekhofi up, nawo unokuba mdaka kakhulu. Khangela la macandelo kunye
cwangcisa ukuchitha imizuzu embalwa eyongezelelweyo ubacoca.
Xa uhlamba iibhanti zokuhlala, sebenzisa kuphela i-detergent yendalo.
Iya kukhusela ukuthembeka kwendwangu yebhanti.
I-dashboard kunye neephaneli zezithuthi kufuneka zisulwe ngendwangu engcolileyo ngamanzi.
Ukususa igrim, sebenzisa isicoci esineenjongo zonke, sinxilisiwe emanzini. Njengamaxesha onke, sebenzisa eyona mveliso inobulali.
Ufuna ukulahla ivumba?
I-OPS isebenza kakuhle, Inika ivumba njengoko icoca kwaye ishiya ivumba elitsha emotweni.
Nokuba wenza ntoni emotweni yakho, yiba mnene. Ngenxa yabenzi '
umdla wokugcina i-buck, kunye nomnqweno wokukhulisa uqoqosho lwe-EPA yamafutha, uninzi
abavelisi basebenzisa izixhobo ezomeleleyo ezingaphantsi. Ukuba usebenzisa imveliso esemgangathweni emibi,
inokutshabalalisa ngonaphakade okanye yonakalise imoto yakho.
Ukucocwa kwezithuthi ngaphakathi kwe-OPS okwenziwe kwindalo kunye nakwindalo,
inokusetyenziselwa iindawo ekunzima ukufikelela kuzo kwaye ibonelela ngeempembelelo ezilungileyo kakhulu zokucoca ezikhawulezayo kunye nezihamba lula.
Isicoci Susa ngokucokisekileyo nangobumnene uthuli lwendlela, izinambuzane, inicotine kunye nesilicon.
Ifanelekile kuwo wonke umphezulu kwaye inikezela ukuhambelana okuhle, umzekelo, iipende, irabha, isikhumba,
iinxalenye zeplastiki emotweni kunye ne-upholstery.
Ungasisebenzisa njani isithambisi se-enzyme yeorenji?
Diliza umgubo okanye ulwelo ukutshiza ibhotile. Qala nge-80: 1-yokucoca amanzi.
Uxinzelelo kunye nokukhuhla ngokucokisekileyo. Ukuba ayisebenzi, yonyusa kancinci umyinge de ube uphumelele.
Phalaza kumhlaba omdaka, sebenzisa ilaphu le-lintfree, itawuli yephepha, amalaphu amancinci emicrosoft okanye ifongo
sasaza ngokulinganayo ngaphezulu kwendawo ukuze icocwe.
Ingasetyenziselwa ukucoca indawo yangaphakathi yeemoto zabakhweli, ii-4wd, izithuthuthu,
izithuthi zaselwandle nezorhwebo kunye nasekhaya okanye eofisini.
Yendalo kunye ne-biodegradable
Gcina iindleko, ezoqoqosho ukuze uzisebenzise
I-Deodorises njengoko icoca
Isusa ukungcola okuninzi kunye namabala
Ngaba uyafuna ukwenza imeko yeprinsine yeenqwelo zakho, ekhaya okanye eofisini? Qhagamshelana nathi Apha!
Yintoni i-Carless Car Wash
Julayi 18, 2020 by admin@opskar.com
Yintoni i-Carless Car Wash?
Indawo yokuhlamba imoto enganxibelelaniyo isebenzisa isher yoxinzelelo oluphezulu kunye neekhemikhali ukuya Coca imoto ngaphandle kokuchukumisa .
Inzuzo ephambili yolu hlobo lokuhlamba imoto kukuba ipeyinti emotweni ayonakalanga ngendlela
inokuba kukuhlanjwa ngemoto esebenzisa ibrashi. Ayisiyiyo nje le mpahla yemoto inikezela ngendlela ekhawulezayo nekulula ngayo
Icoce imoto, kodwa ikwasebenza nokukhupha ukungcola.
Xa imoto ingena kwi-carwash, akukho mfuneko yokuhlamba kwangaphambili kwaye usule ngesandla,
lungiselela ishampu yokuhlamba imoto okanye isepha, kwaye utshize ngokuthe ngqo kumphezulu wemoto ukusuka ezantsi ukuya phezulu.
Isisombululo sokucoca sivunyelwe ukuhlala emotweni okwethutyana emva koko sihlambe. Emva kokuba imoto icocekile,
Ukuhlamba okuphezulu kuxutywa kuyo imoto, ioma, kwaye kuthintela ukwenziwa kwamabala amanzi.
Zininzi izinto onokukhetha kuzo xa uhlamba imoto unganxibelelani nomntu anokukhetha kuyo
benze isicelo emotweni yabo. Ukuhlanjwa kweenqwelo-mafutha ukunganxibelelani kungacoca iigiya zokufika kunye namavili,
ukongeza ekucoceni umzimba wesithuthi. Kuyenzeka ukongeza umaleko we-wax
ngenkqubo enye ngaphandle konxibelelwano. Olu khetho lugqityiwe ngaphambi kokuba imoto yome.
Izisombululo ezahlukeneyo zingasetyenziselwa ukucoca imoto kwi-car-non-contact wash.
Isepha esetyenzisiweyo inokuba nephunga okanye ibala kwaye ihlala ine-asidi okanye ialkaloid kancinci.
Oku kuphambuka kancinane kumacandelo e-hydrogen esemgangathweni (pH) kunceda ukukhulula ubumdaka emotweni.
Izikhululo ezininzi zokunxibelelana ngeemoto ezinganxibelelaniyo zikwabonelela ngezisombululo ezisingqongileyo.
Abanini bezithuthi abaninzi bakhetha ukusebenzisa indawo yokuvasa iimoto enganxibelelananga kuba inkqubo ikhusela umsebenzi wepeyinti wemoto.
Kwakhona, akukho ziqengqelezi okanye iindawo zoomatshini ezinokunxibelelana nemoto kwaye zonakalise izibuko okanye ii-eriyali.
Kwakhona, a Ukuhlamba imoto ngaphandle kokunxibelelana kunokugqitywa ngokukhawuleza, ukuyenza ukhetho olufanelekileyo lomntu kunye
hayi ixesha lokuhlamba imoto ngesandla.
Nangona izitishi zokuhamba ngaphandle kokunxibelelana zizithuthi zikhetho oludumileyo kubanini bezithuthi,
abathandi ukushiya imoto icocekile njengokuhlamba imoto kwesiko.
Kuba ezinye izinto zokuhambisa iimoto azithathiswanga kakuhle.
I-OPS yokucoca umgubo wokuhamba ngaphandle kwemoto ungenza ubuchule obuphezulu kunye namandla acocekileyo acocekileyo
shampoo, isepha, isicoci. Iya kubulala le yesiko. Unomdla ngakumbi? Nceda unxibelelane nathi Apha!
iindidi Akohlulwanga 2 Comments
Iimveliso eziphambili zokucoca imoto 2019
I-Windshield ye-Best Window Washer Fluid Kwi-2019
Imveliso yokuCoca ngaphakathi
Iivili Zamavili Acocekileyo
Iibhetshi ezizimeleyo ze-Bio ezicocileyo
Indlela yokucoca ngaphakathi kweemoto ngemveliso yasemakhaya
Umcocisi oManzi oManzi
Iimveliso zeeNqweliso zeeMoto
I-Productos i-lavado de carros
Iindlela zokuGcina iiMoto eziPhezulu